Paul Doherty, munyori mukuru weBritish wepakati pekare | Zvazvino Zvinyorwa
Paul C Doherty ane mukurumbira uye kubereka English munyori we nhoroondo yenhau, inonyanya kuiswa mu Middle Ages nekutonga kwa Henry VIII, asi zvakare mu Zvekare. Hunyanzvi hwake zvakare kuti akasainawo mabhuku mazhinji ane akasiyana mazita sevaya ve Paul achiomesa (inonyanya kuzivikanwa) kana Michael clynes.
Ichi ndicho kudzokorora kune yayo yakakura shanda, yemakumi matanhatu emabhuku, akakosha kune vateveri veiyo genre, kunyanya nezvakavanzika kugadziriswa uye vaongorori vanopinza eakasiyana mamiriro ezvinhu munharaunda.
2 Nhepfenyuro yakaiswa muMiddle Ages
2.1 Friar Athelstan akateedzana
2.2 Sir Roger Shallot Series - Pasi pemanyepo Michael Clynes
2.3 Hugo Corbett akateedzana - Pasi pemanyepo PC Doherty
2.4 Canterbury Mapilgrim akateedzana
2.5 Templars dzakateerana
3 Dzimwe nhepfenyuro dzakaiswa mune yekare nyika
3.1 Nyaya Alexander Mukuru - yakanyorwa pasi pezita rekunyepedzera Anna Apostolou
3.2 Mutongi Amerokte akateedzana
3.3 Nhepfenyuro Zvakavanzika zvaAlexander Mukuru
Akazvarwa muna 1946 muna Middlesbrough, England, yaizoenda mupristi Katurike, asi akazopedzisira adzidza Historia muLiverpool neOxford. Ikoko akawana doctorate aine chinyorwa paEduardo II naIsabel I. Yakanga iri zvakare sekondari mudzidzisi mumaguta akasiyana siyana.
Nhepfenyuro yakaiswa muMiddle Ages
Friar Athelstan akateedzana
Zvichida akateedzana zvakavanzika zvake chinonyanya kuzivikanwa. Iyo nyeredzi Friar Athelstan, a Dominican izvo, nhevedzano yenjodzi dzakapfuura muhupenyu hwake, dzakagadzirirwa vanozvininipisa nharaunda yeSan Erconwaldo mu kunze kweLondon. Ikoko, nekatsi yake Buenaventura uye bhiza rake Philomel, anotarisira vamwe vanonamata chaizvo uye anozvipira iye kune yake huru hobby, iri dzidza nyeredzi.
Athelstan inoshandawo se notary yaJohn Cranston, iyo coroner yeumambo, murume akazvipira pabasa rake nekunwa. Vaviri vachabatanidzwa uye vachatofanira gadzirisa zvakasiyana zvishamiso, mhosva uye dzimwe mhosva mu medieval London.
Iwo akateedzana akaumbwa nemazita aya:
Iyo Nightingale Garari
Imba yeRed Killer
Chiedza chakajeka cherufu
Iyo yekugara yemakunguwo
Iyo Herald reGehena
Iko Kumukira Kukuru
Sir Roger Shallot Series - Pasi pemanyepo Michael Clynes
Iyi zvakare saga yakakurumbira uye tiri kuenda kuhushe hwa Henry VIII. Roger Sharot es shamwari yemuzukuru waCardinal Wolsey uye ndichamushandira seanoshanda. Nyaya dzese dzinotaurwa muhunhu hwekutanga.
Mhosva dzechena dzakasimuka
Chalice ine muchetura
VaGallows Mhondi, 1995
VaRicic Kuponda, 1996
Hugo Corbett akateedzana - Pasi pemanyepo PC Doherty
Gara mu kutonga kwaEdward I kubva kuEngland. Ivo vane protagonist zvakare a munyori wamambo, Hugo Corbett, uyo achazovewo agent y spy.
Dhiyabhorosi muSanta Maria
Mutengesi pa chancery
tsika yacho usaite mumongi
Muurayi weGreen Sango
Rwiyo rwemutumwa werima
Canterbury Mapilgrim akateedzana
Maererano ne Canterbury Tales uko kune vamwe vafambi vanogovana horror stories panguva dzousiku dzavanopedza vari pamwe chete.
Zvitunha zvakawanda nebhokisi risina chinhu
Rwiyo rwemurume akasungirirwa
Kushamwaridzana kweMhondi, Kuva Munyori Wenyaya
Murume wepakati pehusiku
Novelas nhoroondo kushandisa, chivi icho chikamu che Chakavanzika.
Iye Templar Muroyi
Dzimwe nhepfenyuro dzakaiswa mune yekare nyika
Nyaya Alexander Mukuru - yakanyorwa pasi pezita rekunyepedzera Anna Apostolou
Mutongi Amerokte akateedzana
Akagara muIjipita yekare.
Iyo maski yaRa
Nhepfenyuro Zvakavanzika zvaAlexander Mukuru
Alexander Mukuru muimba yerufu
Iye asingatendi kuti kuna Mwari
Kuponda Kusingafi Mask
Yakazara nzira kuchinyorwa: Zvazvino Zvinyorwa » Literature » Vanyori » Paul Doherty, munyori akabudirira weBritish wepakati pekare
Kubvunzana naCarlos Dosel, munyori weSombras en el faro